Igbo, John: Lesson 028 - Jisos na - edu onye na - akwa iko rue ncheghari (Jọn 4:1-26) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 028 (Jesus leads the adulteress to repentance)
1 Ya mere, mgbe Onyenwe anyị maara na ndị Farisii anụwo na Jizọs na-eme ma na-eme ndị na-eso ụzọ baptizim karịa Jọn 2 (ọ bụ ezie na Jizọs n'onwe ya emeghị mmadụ baptizim, kama ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya), 3 ọ hapụrụ Judia wee gawa Galili. Ọ ghaghi igabiga na Sameria. 5 O we biarue obodo Sameria, aha-ya bu Saika, nke di n'akuku ib͕e ahu nke Jekob nyere nwa-ya, bú Josef. 6 Mmiri Jekọb nọ n'ebe ahụ. Ya mere Jisus, ebe ike gwuru Ya n'ije-Ya, Ọ nọduru ala n'akuku isi-iyi ahu. Ọ bụ ihe dị ka elekere nke isii.
Onye na-ezisa ozi ọma na-akpọ Jizọs 'Onyenwe anyị', Onye na-achị dị ka Eze ruo mgbe ebighị ebi n'akụkọ ihe mere eme. Ọ na-ata ahụhụ ma na-egosi amara. Ọ na-edu ha na ndị ikpe. Ọ hụrụ otuto ya ma kwanyere ya ùgwù site aha a dị ebube.Ndị Farisii amalitela ịkwado, dị njikere maka agha. Ozizi Kraịst na Judia bụ ihe ịga nke ọma. Ọ kpọrọ ndị mmadụ ka ha chegharịa, kwupụta mmehie ha, dịka Baptist. Ọ dị ka à ga - asị na o weghaara onye Baptist (ọ bụ ezie na ya onwe ya emeghị baptizim, ma hapụ nke a nye ndị na - eso ụzọ ya). Jizos kụziri na baptizim nke mmiri ab ghi ihe obla maob iheeme nke Mmo Nso. Ma oge awa ya abighi, maob ghi onwe ya mere baptizim.
Mgbe mmegide ndị Farisii na-abawanye, Jizọs hapụrụ n'ebe ugwu. O bi ndu dika atụmatụ Nna ya si di. Oge ịlụ ọgụ na ndị na-ede iwu a erubeghị. Jizos choro njem site n'ugwu ugwu ma banye na Sameria, weghaara ya na Galili.
Ndị Sameria a abụghị ndị a ma ama n'Agba Ochie, ebe ọ bụ na ha bụ otu ìgwè mmadụ na ọbara ụfọdụ nke Israel. Mgbe ndị Asiria wakporo Sameria na 722 BC, ma ọtụtụ n'ime mkpụrụ Abraham a chụgara Mesopotemia, ha biri n'akụkụ ndị ọzọ na Sameria. Ya mere, ihe jikọrọ ya, nke mekwara ka a kwenye nkwenye.
Jizọs biara na Sikchi nke dị nso na Shekem, ebe etiti nke ndi nna ochie. Ọ bụkwa ebe maka ọgbụgba ndụ Joshua na ndị mmadụ na Chineke (Jenesis 12: 6 na Jọshụa 8: 30-35). E nwere oge ochie nke ọma, nke e weere na ọ bụ Jekọb (Jenesis 33:19). Egburu ọkpụkpụ Josef n'akụkụ Neblus (Jọshụa 24:32). Mpaghara a wee ghọọ akụkọ ihe mere eme na Agba Ochie.
Jizọs nọdụrụ n'akụkụ olulu mmiri, ike gwụrụ ya site na ogologo njem na okpomọkụ nke ehihie. Ọ bụ ezigbo nwoke, ike gwụrụ na akpịrị na-akpọ nkụ, ọ bụghị ihu igwe ma ọ bụ ọdịdị Chineke dị ka mmadụ - mmadụ nke nwere njirimara nke adịghị ike ụmụ mmadụ.
7 Otù nwanyi nke Sameria biara isere miri. Jizọs sịrị ya: "Nye m mmiri ka m ṅụọ." 8 N'ihi na ndị na-eso ụzọ ya banyere n'obodo ahụ ịzụta ihe oriri. 9 Ya mere nwanyi Sameria ahu si Ya, Gini mere Gi onwe-gi bu onye-Ju, riọm ka m'ṅua miri, bú nwanyi Sameria? (N'ihi na ndi-Ju na ndi Sameria adighi-emekọ ihe.) 10 Jisus zara ya, si, ma ọ bụ onye na-asị gị, 'Nye m mmiri ka m ṅụọ,' ị gaara arịọ ya, ọ gaara enyekwa gị mmiri na-enye ndụ. "11 Nwaanyị ahụ sịrị ya," Nna anyị ukwu, ị nwere enweghị ihe ọ bụla ị ga-eji, mmiri ahụ dịkwa omimi. Kedu ebe i nwere mmiri ahụ dị ndụ? Gì onwe-gi ka nna-ayi Jekob uku, onye nyere ayi olùlù-miri ahu, we ṅua ya, na umu-ya, na anu-ulo-ya, ṅu kwa ya? 13 Jisus zara ya, si, Onye ọ bula nke gāṅu miri a, akpiri gākpọ ya nku ọzọ; onye ọ bula nke gāṅu miri ahu nke Mu onwem gēnye ya, akpiri agaghi-akpọ ya nku ọzọ ma-ọli; ma mmiri nke m ga-enye ya ga-aghọ olulu mmiri n'ime ya nke na-asọpụta ruo na ndụ ebighi ebi." 15 Nwaanyị ahụ sịrị ya," Nna anyị ukwu, nye m mmiri a, ka akpịrị ghara ịkpọkwa m nkụ, ụzọ a iji bia."
Mgbe Jizọs guzo n'akụkụ olulu mmiri ahụ, otu nwanyị Sameria bịarutere isere mmiri. Ọ bịaghị n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbede dị ka ụmụ nwanyị ndị ọzọ, ma n'ehihie. Ọ chọghị izute mmadụ ọ bụla; na aha ọjọọ ya na-eme ya ihere ebe ọ bụla ọ gara. Jizọs nwere ike ịmata obi ya nke nwere nsogbu n'obi, ọ gụkwara ya agụụ ịsacha ya. O kpebiri inyere ya aka; O meghị Iwu Iri ahụ, ọ baghịkwa ya mba, kama ọ rịọrọ maka mmiri; o weere ya dị ka onye nwere ike inye ya mmiri. Ma, mgbe ọ matara na ọ bụ onye Juu, ọ kwụsịrị. N'ihi na enwere ugwu n'etiti ndi ya na ya. Ruo n'ókè nke na akụkụ ọ bụla agaghị emetụ arịa ndị nke ọzọ aka maka egwu mmetọ. Otú ọ dị, Jizọs mere omume dị ka à ga-asị na e nweghị ihe mgbochi omenala n'etiti ha, na-asọpụrụ ya site na arịrịọ ya.
Nzube nke Kraist bu ime ka aguu nke Chineke no n'onye nmehie a. Ebe ebe ahụ dị mma, o kwesịrị ekwesị ikwu banyere mmiri. Nke a kpaliri ọchịchọ na ya maka onyinye nke Chineke. O debere ịhụnanya Chineke n'ihu ya dị ka ihe mgbaru ọsọ. Ọ bụghị ikpe na-eche ya maka ọdịda, ma ọ bụ onyinye Chineke kwadebeere ya na amara. Nso akwa utịbe utịbe.
Amara anaghị abịa site na windo kama ọ na-abata na Onye nke naanị Jizọs. Ọ bụ onye na-enye talent na ọmịiko Chineke. Nwaanyị ahụ hụkwara ya dị ka mmadụ nkịtị. Ebube otuto nke Kraist ka ezoro ya n'anya, ma ịhụnanya ya dị ọcha kpughere n'ihu ya. Ọ gwara ya na mmiri dị ndụ bụ ihe onwunwe ya. Ihe ọṅụṅụ nke eluigwe nke ọ na-enye na-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ gwụ ya. Ndị mmadụ na-achọ ogologo oge maka ịhụnanya na eziokwu ma chọọ ịlaghachikwute Chineke. Onye na-abịakwute Jizọs na-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ kpọọ ya nkụ.
Jizọs nyere onyinye Chineke nye ndi choro ya. Anyị ga ekwupụta mkpa anyị, dịka Jizọs kwupụtara mkpa ọ dị mmiri. Onye ọ bụla nke na-adịghị ehulata isi ya ma jụọ, agaghị enweta mmiri nke eluigwe n'ezoghị ọnụ.
Nwaanyị ahụ aghọtaghị Jizọs. Ọ zaghachiri n'ụzọ dị irè, sị, "I nweghị mmiri ịṅụ mmiri, olulu mmiri ahụ dịkwa omimi, oleezi otú i nwere ike isi nye m mmiri?" N'otu oge ahụ, ọ gbagwojuru anya ka ọ hụrụ obiọma na ịhụnanya Jizọs. N'adịghị ka ndị agbata obi ya, ọ ledaghị ya anya. Ọ bụ n'ebube ya, ma ọ hụrụ ya n'anya n'ịdị nsọ ya. Ọ dịtụbeghị mgbe ọ zutere nwoke dị ọcha dị ka ọ dị. N'ihi ya, ọ jụrụ, sị: "Ị ka nna nna gị Jekọb? Ị na-ezube ịrụ ọrụ ebube ma nye anyị ahụ ọhụrụ?"
Jizọs zara ya na o nweghi ala nke ala, ebe onye obula n'eme ka akpiri ikpo nku ya gua miri, akpiri gua ya nku. Ahụ na-ejikarị mmiri ma na-ekpochapụ ya.
Otú ọ dị, Jizọs na-enye anyị mmiri na-enye ndụ, na-ehichapụkwa akpịrị ịkpọ nkụ nke mmụọ. Ndị Kraịst na-achọ Chineke ma chọta Ya. Ha abụghị ndị ọkà ihe ọmụma na-atụgharị uche n'eziokwu n'ebughị ya. Chineke achọtawo ha; ha maara Ya n'ozuzu. Ịhụnanya ya na-enye anyị ohere mgbe niile. Ngosipụta ya anaghị adị egwu ma ọ bụ oge ọhụụ, ma ọ na-eto, ọ bụ na ọ bụghị echiche, mana, ndụ, ìhè na udo. Mmụọ Nsọ bụ onyinye Chineke nke eluigwe.
Ugboro ato Jisos kwughachiri na obu nani ya bu onye nyere mmiri di ndu. O nweghị okpukpe ma ọ bụ otu, enweghị mmekọrịta ma ọ bụ ọbụbụenyi nwere ike ime ka akpịrị ịkpọ nkụ gwụ gị, ọ bụ naanị Jizọs Onye Nzọpụta gị.
Onye obula nke natara onyinye Chineke ka emegharia. Onye akpịrị na-akpọ nkụ na-aghọ isi iyi nke mmiri na-asọba iji gọzie ndị ọzọ, na-enye ha amara, ọṅụ na ịhụnanya na mkpụrụ ndị ọzọ nke Mmụọ Nsọ. Ịnọgide na Kraịst anyị na-enweta amara na amara, na-aghọ onwe ya onyinye Chineke nye ọtụtụ.
Nwanyị ahụ chere na Jizọs bụ ezigbo onye ya na ya na-akparịta ụka na onye na-enweghị anwansi. Ọ jụrụ ya maka mmiri ahụ dị ndụ. Ọ kwupụtara mkpa ya, ma nọgidere na-eche na Jizọs ka na-ekwu maka mmiri ụwa. O chere na inweta mmiri ahụ, ọ gaghịzi adị mkpa iburu ite ahụ n'isi ma soro ndị kpọrọ ya asị.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, onye na-enye mmiri dị ndụ. Mee ka akpịrị ịkpọ nkụ gụọ anyị maka inweta ihe ọmụma na ịhụnanya. Gbaghara mmebi iwu anyị; me ka ayi di ọcha, ka Mọ Nsọ we dakwasi ayi, we nọyere ayi rue mb͕e ebighi-ebi. Ka anyi buru isi iyi nke mmiri, ka otutu ndi mmadu nwere ike inu site na njuju nke Mo Nso, tinye nime obi anyi. Kụziere anyị ịdị umeala n'obi, ekpere, ịhụnanya na okwukwe.
Gịnị bụ onyinye Jizọs nyere anyị? Kedu àgwà ya?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:49 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)